သမ္မတကြီး(ငြိမ်း) ဦသိန်းစိန်မှ ပြီးခဲ့​သည့်​ ဆယ်တန်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းက ထူးချွန်ကျောင်းသားများကို အငြိမ်းစားလစာမှ ထောက့်ပံမည်...! - Thadin
HomeNEWSသမ္မတကြီး(ငြိမ်း) ဦသိန်းစိန်မှ ပြီးခဲ့​သည့်​ ဆယ်တန်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းက ထူးချွန်ကျောင်းသားများကို အငြိမ်းစားလစာမှ ထောက့်ပံမည်…!
သမ္မတကြီး(ငြိမ်း) ဦသိန်းစိန်မှ ပြီးခဲ့​သည့်​ ဆယ်တန်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းက ထူးချွန်ကျောင်းသားများကို အငြိမ်းစားလစာမှ ထောက့်ပံမည်…!
June 12, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on သမ္မတကြီး(ငြိမ်း) ဦသိန်းစိန်မှ ပြီးခဲ့​သည့်​ ဆယ်တန်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းက ထူးချွန်ကျောင်းသားများကို အငြိမ်းစားလစာမှ ထောက့်ပံမည်…!
ဧရာဝတီတိုင်းသား သမ္မတကြီး(ငြိမ်း) ဦသိန်းစိန်မှ ပြီးခဲ့​သည့်​ တက္ကသိုလ်​ဝင်​စာ​မေးပွဲတွင်​ ..
ထူးချွန် စွာအောင်​မြင်ခဲ့​သော ဧရာဝတီတိုင်းက (၁ – ၁၀) ဝင်သော ထူးချွန်ကျောင်းသားများအား ဂုဏ်ယူ ကြောင်းနှင့်​ ကျောင်းနေ/ စားရိတ်များကို အငြိမ်းစားလစာ မှထောက့်ပံမည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီး(ငြိမ်း) ဦသိန်းစိန် ဖုန်းပြောနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
သမ္မတကြီး(ငြိမ်း) ဦသိန်းစိန်မှ ထူးချွန်ကျောင်းသားများကို အဆောင်မှာ အခမဲ့ထားပေးပြီး ဘွဲ့တစ်ခုခု ရစေချင်ကြောင်းနှင့် ဘီအီဒီဘွဲ့လေး ရစေချင်းကြောင်းနှင့် ကလေးတွရဲ့ သဘောဆန္ဒတွေကိုလည်း သူတို့ ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုလေးတွေကို မေးမြန်းစေခဲ့ပါပါတယ်။
Source – Aye Chan Min
ဧရာဝတီတိုငျးသား သမ်မတကွီး(ငွိမျး) ဦသိနျးစိနျမှ ပွီးခဲ့​သညျ့​ တက်ကသိုလျ​ဝငျ​စာ​မေးပှဲတှငျ​ ..
ထူးခြှနျ စှာအောငျ​မွငျခဲ့​သော ဧရာဝတီတိုငျးက (၁ – ၁၀) ဝငျသော ထူးခြှနျကြောငျးသားမြားအား ဂုဏျယူ ကွောငျးနှငျ့​ ကြောငျးနေ/ စားရိတျမြားကို အငွိမျးစားလစာ မှထောကျ့ပံမညျဟု သိရှိရပါသညျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး သမ်မတကွီး(ငွိမျး) ဦသိနျးစိနျ ဖုနျးပွောနတေဲ့ ဗှီဒီယိုဖိုငျတဈခု ကို တငျပွပေးလိုကျပါသညျ။
သမ်မတကွီး(ငွိမျး) ဦသိနျးစိနျမှ ထူးခြှနျကြောငျးသားမြားကို အဆောငျမှာ အခမဲ့ထားပေးပွီး ဘှဲ့တဈခုခု ရစခေငျြကွောငျးနှငျ့ ဘီအီဒီဘှဲ့လေး ရစခေငျြးကွောငျးနှငျ့ ကလေးတှရဲ့ သဘောဆန်ဒတှကေိုလညျး သူတို့ ဘာဖွဈခငျြလဲဆိုလေးတှကေို မေးမွနျးစခေဲ့ပါပါတယျ။
ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းများ…!
တစ်တန်းကျောင်းသူလေးကို (၉)တန်းကျောင်းသားက ကျောင်းအိမ်သာထဲခေါ် မုဒိန်းကျင့်…!
This Month : 25335
This Year : 278805
Total Users : 637829
Total views : 2988243